अायाे डोटीबाट यस्ताे आन्दोलन, अब प्रदेश नं. ७ काे राजधानी के हाेला ?
माघ ६, डोटी ।
प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी डोटीको दिपायल कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै २५ दिनदेखिको डोटीको आन्दोलनले जनजीवन पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ।
सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढीमा तोकेसँगै डोटीमा आन्दोलन झनै चर्केको हो। आन्दोलनले उग्र रुप लिइसकेको छ। शनिबार बिहानैदेखि आन्दोलनकारीहरु सडकमा उत्रिसकेका छन्।
डोटीको आन्दोलनले गर्दा यस प्रदेशका सात वटै पहाडी जिल्लाहरुलाई प्रभावित तुल्याएको छ। डोटीको बुडर क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलन र यातायात बन्दले सातवटै पहाडी जिल्लामा यातायात सेवा चल्न सकिरहेको छैनन्। डोटी बाहेक अन्य जिल्लाहरुमा जिल्ला भित्रै स्थानीय रुपमा गाडीहरु चलिरहेका भएपनि बाहिरबाट आउने लामो दुरीका यातायातका साधनहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरिएका छन्।
बन्दका कारण सात वटा पहाडी जिल्लाका यात्रुहरु तराईका जिल्ला तथा राजधानीतिर जान र जिल्ला भित्रिन सकिरहेका छैनन्। डोटीको बुडर क्षेत्रको बिहीबार बेलुकादेखिको आन्दोलन तथा यातायात बन्दले सातवटै जिल्लामा खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्यका सामानहरु आपूर्ति हुन सकेको छैन।
लगातार २५ दिनदेखिको आमहड्ताले गर्दा जनजीवन प्रभावित बनेको हो।
पूर्णरुपमा आमहड्ताल गरिएको छ। यातायात, बजार, कलकारखाना, विद्यालय, कार्यालय पूर्णरुपमा बन्द भएका छन्। डोटीमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण निकायको सहभागितामा आन्दोलन छ।
आन्दोलनकारीहरुले डोटीमा रहेका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुका बोर्डहरु हटाएका छन् भने कार्यालयहरुमा कालो झण्डा गाडिएको छ। केही कार्यालयका झ्यालका सिसा तथा सुझाबपेटिका, सूचना बोर्ड तोडफोड समेत गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरुको आक्रोशित भीडले सिलगढीस्थित जिल्ला हुलाक कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा आगो लगाइदिएका छन्। आन्दोलनकारीले लगाएको आगोबाट कार्यालयमा केही क्षति पुगेको छ भने कागजातहरु जलेर नष्ट भएका छन्।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप समेत भएको थियो। प्रहरीको लाठी चार्जबाट नकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चक्रबहादुर मल्ल, नेकपा माओबादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य जनार्दन जोशी, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मञ्जु मलासी, नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य बिजयराज ओझा लगायत दर्जनौ आन्दोलनकारीहरु घाइते भएका छन्।
प्रहरीको कुटाइबाट जिल्ला कुषि विकास कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने मजदुरहरु समेत घाइते भएका छन्। भवन भित्रै काम गरिरहेका बेला प्रहरीले कुटपिट गरेको थियो। खगेन्द्रबहादुर सिंह/अन्नपूर्ण पाेष्टबाट